.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Android ဖုန်းက သီချင်းသံကို ၂ ဆ ကျယ်လာစေမယ့် Sensor music player
Android ဖုန်းက သီချင်းသံကို ၂ ဆ ကျယ်လာစေမယ့် Sensor music player
Android ဖုန်းတွေမှာ သီချင်းဖွင့်နားထောင်လို့ အသံတိုးနေတယ်ဆိုရင် Sensor Music Player လေးကို
သုံးကြည့်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ရိုးရိုး Player နဲ့ ဖွင့်တာထက် အသံနှစ်ဆ ပိုကျယ်တဲ့အပြင်
သီချင်းဖွင့်ထားတဲ့အချိန် နောက်တစ်ပုဒ်ကျော်ချင်ရင် ခလုတ်တွေ လိုက်နှိပ်စရာမလိုပဲ ဖုန်း Screen ပေါ်ကို
လက်ကလေးဝှေ့လိုက်တာနဲ့ ပြောင်းတာ၊ ဖုန်းကို ဘောင်းဘီအိတ်ထဲ ထည့်ထားရင်း ပုတ်လိုက်တာနဲ့
ပြောင်းတာ၊ စားပွဲပေါ်တင်ထားရင်း တစ်ချက်ထုလိုက်တာနဲ့ နောက်တစ်ပုဒ် ပြောင်းတာတွေပါ ပါဝင်ပါတယ်။
Player ကို ဖွင့်ပြီးတော့ LIBRARY ကို နှိပ်ကာ ကိုယ် နားထောင်ချင်တာကို ရွေးဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ အောက်ဆုံးက All tracks ပဲ ရွေးထားပါတယ်။
အသံ ၂ ဆ ကျယ်ဖို့ကတော့ အပေါ်ဆုံးက ပုံလေးရဲ့ ညာဘက်အစွန်က ဝိုင်းပြထားတာလေးကို နှိပ်ပြီး
အပေါ်ကို ဆွဲတင်လိုက်ရုံပါပဲ။ သီချင်းကို နားထောင်ကြည့်ပြီး အဆင်ပြေသလို ရွှေ့လိုက်ပေါ့နော်..။
သုံးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ဒေါင်းယူသွားနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ..။
Download: Sensor music player
Posted by Thurainlin at 19:47
Labels: Android App, Music, Software